China BEUFILLER hyaluronic acid Lip Filler fekitori uye vagadziri | Beulines
BEUFILLER Muchinjikwa-wakasunganidzwa hyaluronic acid dermal filler yakasarudzika yakasimbiswa hyaluronic acid isiri yemhuka mavambo, inozivikanwa kwazvo inoshandiswa kukwidziridza muromo, nekuti inodhura zvakanyanya uye inogona kupa mhedzisiro nekukurumidza nenguva shoma yekudzoreredza.
1, Mutengo: BEUFILLER
3, Chinyorwa Chibviro: Inotorwa kubva kukorea
4, Syringe Brand: BD Kambani
5, Muchinjikwa-Akabatana mumiririri: BDDE
6, Huwandu hweSingano / Chidimbu: 2 BD tsono
7, pasherufu hupenyu: 3 makore
Zvimiro zve BEUFILLER Hyaluronic acid miromo yekuzadza
1. Zvisikwa zvakasikwa: zvinobva kumatumbu enyama, saka hapana kwekunze kwekunzwa muviri uye nyaya yekunze yasara.
2. Zvigadzirwa zvepamusoro-soro: kuburikidza neepamusoro-tech nzira uye yakasimba yekugadzira tekinoroji, mhando yechigadzirwa inovimbiswa, hapana kurambwa uye kugadzikana kwekuita
3. Rakareruka, rakachengeteka, rinokurumidza uye rinobudirira: Mini epurasitiki kuvhiya haidi kuvhiyiwa, chete intradermal jekiseni inodiwa, iyo inodzivirira njodzi yekuvhiyiwa. Panguva imwecheteyo, iyo micro facelift inoshandisa jekiseni remuno, saka mhedzisiro inogona kuoneka nekukasira.
4. Inonyaradza uye isingarwadzise: micro-cosmetic kuvhiyiwa inoshandisa jekiseni nzira, kungofanana nejekiseni, kune kungozvimba kudiki uye marwadzo mashoma munzvimbo yemuno, hapana kurwadziwa kukuru, kuri nyore kuti vatengi vagamuchire.
5. Mari uye inoshanda: Mari yekuvhiyiwa kwepurasitiki iri pakati pekunaka kwehupenyu nekuvhiyiwa kwepurasitiki, uye mutengo wacho wakachipa.
6. Wide akasiyana mashandiro: Nekuti iri yezvinhu zvipenyu uye inogona kutorwa, inogona kushandiswa mune chero chikamu.
3.Ce, MDSAP, ISO chitupa
Yedu Kurapa Sodium Hyaluronate Gel yakawana chitupa cheEU CE muna 2008, ndicho chigadzirwa chekutanga muChina icho chakawana mbiri mbiri cheti yeEC uye yepasi rose GMP certification.Muna 2016, takawana MDSAP certification, uye zvigadzirwa zvakatengeswa munyika makumi mana nematunhu. kutenderera pasirese.
Type Derm Derm Yakadzika Derm Uyezve
Vhoriyamu sirinji 1ml / 2ml 1ml / 2ml 10ml / 20ml
Mashoko Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA
HA kusangana 24mg / Rine mamiririta 24mg / Rine mamiririta 20mg / Rine mamiririta
Kukura kweparticle 0.15mm-0.28mm 0.28mm-0.5mm 0.5mm-1.25mm
Nhamba inofungidzirwa yeiyo gel particles ml 100000 10000 5000
Yakashandiswa 27G 30G Kwete kupihwa
Kwokupinza jekiseni Pakati chikamu che dermis Yakadzika yakaturikidzana yedermis uye / yepamusoro peiyo subcutis Chikamu chepamusoro che dermis
Zviratidzo zvinokurudzirwa Wakaenzana makwinya Yakadzika kumeso kuunyana uye kupeta Makuru akadzika wirnkles uye akapeta
Mubvunzo: Une chekuzadza zvachose?
A: Chinhu chikuru chekuzadza zvachose isimbi bone. Mushure mejekiseni, samende repfupa rinokura zvishoma nezvishoma pamwe chete neganda reganda, harigone kuburitswa kunze, uye harigone kunyudzwa, njodzi yemhedzisiro uye sequelae yakakwira.Hyalurnic acid yekuzadza ndiyo inonyanya kufarirwa uye yakachengeteka kurapwa ikozvino, kazhinji Mwedzi 6-18 inguva yakareba kwazvo pasi pechirevo chekuona kuchengetedzeka kwakanyanya.
Mubvunzo: Anesthetic irimo?
A: Kusangana nezvakasiyana siyana zvinodiwa kubva kune vatengi, isu takagadzira matatu matsva mamodheru ane 3% lidocaine, kana iwe uchida iwo, ndapota nyorera kutengesa kwedu!
Mubvunzo: Mhedzisiro yacho inogara kwenguva yakareba sei?
A: Mhedzisiro yekurapa ichave yakasiyana kubva kumunhu wega wega. Muchidzidzo chekiriniki, mhedzisiro yekurapa yakagara kwemwedzi gumi nemaviri kusvika gumi nemasere mushure mekutanga kurapwa chikamu chevarwere vazhinji. Kubata-kumusoro kurapwa kunogona kuchengetedza zvaunoda.
Mubvunzo: Zvakachengeteka kupinza here?
A: Ehe! Kune njodzi shoma kwazvo dzakanangana nekurapwa ne BEULINES brand hyaluronic acid dermal filler, Kana maketani asunungurwa vanotevedza nzira imwechete seyakasikwa HA. ​​Huwandu hwe HA hwakashatiswa uye hunobviswa zuva rega rega kubva pakuisirwa haukoshese uchienzaniswa neicho chiri inowanzo kudzikiswa mumuviri.Iyo inoputsika nemuviri. Hapana chimwe chazvo chinoramba chiri muganda uye ganda haritadzike kukuvara.
Kana zvisiri kugadzirisa mubvunzo wako, ndapota inzwa wakasununguka kubata vatengesi vedu!
Pashure: BEULINES Muchinjikwa Wakabatana HA Dermal Filler Gels
Zvadaro: BEUFILLER Muchinjikwa-wakabatanidzwa Hyaluronic Acid Dermal Yekuzadza Gels
Hyaluronic Acid Lip Yekuzadza
Hyaluronic Acid Mir Mafirita
Hyaluronic Acid Miromo Kuzadza
Hyaluronic Acid Miromo Inozadza